I-gite eqhotyoshelweyo ekupheleni kwehlathi. - I-Airbnb
I-gite eqhotyoshelweyo ekupheleni kwehlathi.
Basse Bodeux, Belgium
Le ndlu ikwi-Basse-Bodeux inamagumbi okulala ama-4 kwaye inokuhlala abantu abasi-8. Ilungele usapho olunabantwana le ndawo ivumela izilwanyana ezi-3.
Indawo enehlathi nje ukuphoswa kwelitye ayikho kude kakhulu kumbindi wedolophu (3 km), ukubonelela ngokubanzi kunokufunyanwa kufutshane ngokufanayo. I-ski lift imalunga neekhilomitha ezi-8 ukusuka kwindawo.
Le ndawo inekhitshi elivulekileyo elinazo zonke izixhobo zale mihla, kanye ecaleni kwegumbi lokuhlala apho uya kufumana itv, istiriyo kunye nesitovu somthi.
Indlu inendawo yokufudumeza esembindini kunye nethala elinelanga lokuthuthuzela kwakho apho unokonwabela ibarbecue elungileyo ngelixa abantwana bakho bedlala nezilwanyana zasekhaya egadini. Izilwanyana zasekhaya zamkelwa xa zibhengezwa phambi kokufika kwiintlawulo ze-€ 2,50/Isilwanyana/Ebusuku, ubuninzi bezilwanyana zasekhaya ezi-3 zivumelekile.
Izithuthi zikawonke-wonke zifumaneka kwi-10 km ukusuka endlwini
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Igumbi lokuhlala (iTV(isathelayithi), itafile yokutyela, isitovu(inkuni), iyunithi yestereo), ikhitshi elivulekileyo (umatshini wekofu, i-oveni, imicrowave, umatshini wokuhlamba izitya), igumbi lokulala (2x ibhedi eyodwa), igumbi lokulala (2x ibhedi eyodwa), igumbi lokulala (ibhedi elala umntu), igumbi lokuhlambela (ishawa), igumbi lokuhlambela(ibhafu yokuhlambela), i-mezzanine (2x ibhedi eyodwa)
yangasese, zokufudumeza(central), iterrace, igadi, ifenitshala yegadi, BBQ, ibhedi yabantwana
Izimvo eziyi-6 022
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Basse Bodeux